संयुक्त राज्य अमेरिका मा आप्रवासी र शरणार्थीका लागि छात्रवृत्ति | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
चान्डलर मसीही द्वारा फोटो, सीसी.
म शरणार्थीका लागि आप्रवासी लागि छात्रवृत्ति र छात्रवृत्ति कसरी पाउन सक्नुहुन्छ?
त्यहाँ आप्रवासी लागि शरणार्थीका लागि धेरै छात्रवृत्ति र छात्रवृत्ति छन्. तपाईं को लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ भनेर छात्रवृत्ति आफ्नो शिक्षाको लागि भुक्तानी गर्न बारेमा जान्न.
छात्रवृत्ति के हुन्?
छात्रवृत्ति तपाईं कलेज भुक्तान गर्न मद्दत पैसा पुरस्कार हो.
अमेरिका मा, विद्यार्थी वित्तीय सहयोग को लागि छात्रवृत्ति लागि लागू गर्न को लागि यो सामान्य छ (पैसा) तिनीहरूलाई कलेज भुक्तान गर्न मद्दत गर्न. यो पृष्ठमा छात्रवृत्ति शरणार्थी र आप्रवासी विद्यार्थीहरूको लागि हो. तिनीहरूलाई केही लागि हो “पहिलो पुस्ता” विद्यार्थी. यो तपाईंको आमाबाबुले आप्रवासी वा शरणार्थी थिए अर्थ राख्छ. यो पनि एउटा आप्रवासी वा शरणार्थी अब नागरिकता छ जो छन् मतलब गर्न सक्नुहुन्छ.
आप्रवासी र शरणार्थीका लागि राष्ट्रिय छात्रवृत्ति
CharterUp राष्ट्रीय छात्रवृत्ति आप्रवासियों अनि शरणार्थी लागि
एक छात्रवृत्ति $10,000 प्रत्येक वर्ष सम्मानित छ. यो छात्रवृत्ति गैर-अक्षय छ. त्यो तपाईं यसलाई फेरि अर्को वर्ष प्राप्त हुनेछ मतलब. यो एक शैक्षिक वर्ष लागू गर्न सकिन्छ. आवेदकहरुलाई को एशिया | बाहिर जन्म हुनुपर्छ र विद्यालय पहिले नै हुनुपर्छ (वा स्वीकार) एक आधिकारिक एशिया | कलेज वा विश्वविद्यालयमा पूर्ण-समय स्नातक विद्यार्थी रूपमा. कलेज भर्ना गर्न चाहने उच्च विद्यालय वरिष्ठ पनि योग्य छन्. हालैको एउटा ट्रान्सक्रिप्ट एक GPA देखाउन पर्छ 3.4 वा ठूलो.
को Dream.US छात्रवृत्ति - राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
DREAMers लागि सम्भव stipend संग अक्षय छात्रवृत्ति (DACA र टीपीएस). एक stipend मुद्रा को एक योगफल तपाईं आफ्नो छात्रवृत्ति बाहेक प्राप्त गर्न सक्छ छ. तपाईं पहिलो पटक एक एसोसिएट वा स्नातक गरेको डिग्री कार्यक्रममा पूर्ण समय भर्ना योजना हुनुपर्छ. उच्च विद्यालय स्नातक (वा HSE उपाधि) GPA हुनुपर्छ 2.5+. सामुदायिक कलेज स्नातकहरूको GPA हुनुपर्छ 3.0+. तपाईं साझेदार कलेज मा-राज्य शिक्षण लागि योग्य हुनुपर्छ.
सपना. अमेरिकी छात्रवृत्ति - अवसर छात्रवृत्ति
DREAMers लागि छात्रवृत्ति (DACA वा टीपीएस) अमेरिका बस्ने तिनीहरूले बाहिर-को-राज्य शिक्षण तिर्न हुनेछ वा छैन आफ्नो राज्य मा विद्यालय स्वीकृत गरिनेछ जहाँ. तपाईं उच्च विद्यालय स्नातक वा GPA संग HSE उपाधि कमाएको हुनुपर्छ 2.8+ .
गेट्स सहस्राब्दी विद्वान कार्यक्रम
अफ्रिकी अमेरिकी लागि छात्रवृत्ति, अमेरिकी भारतीय / अलास्का निवासी *, एशियाली प्यासिफिक आइल्यान्डर अमेरिकी, र हिस्पानिक अमेरिकी विद्यार्थीहरू. तपाईं एक हुनुपर्छ “महत्वपूर्ण वित्तीय आवश्यकता” अमेरिका मा. तपाईं आफ्नो परिवार बनाउँछ कति पैसा साझेदारी गर्न आवश्यक हुनेछ र तपाईं लागू गर्न सक्नुहुन्छ भने तिनीहरूले निर्णय गर्नेछ.
संपर्क: http मा अनलाइन फारम://gmsp.org/a-contact-us/#
नयाँ अमेरिकी लागि पावल र Daisy Soros वृत्ति
एक $90,000 अधिक सम्मानित2आप्रवासी लागि वर्ष, शरणार्थी, र पहिलो पुस्ता अमेरिका. तपाईं एक स्नातक डिग्री कार्यक्रममा पूर्ण समय भर्ना योजना हुनुपर्छ. तपाईं पनि उमेर अन्तर्गत हुन में 31.
आप्रवासियों लागि बुल्स छात्रवृत्ति को चलिरहेको
दुई $1000 आप्रवासी लागि छात्रवृत्ति वा आप्रवासी को बच्चाहरु. योग्य हुन तपाईं4वर्ष कलेज हुनुपर्छ वा4वर्ष कलेज द्वारा स्वीकार गरिएको हुनुपर्छ. तपाईंको GPA हुनुपर्छ 3.0 वा उच्च साथै.
गैर लाभ मुक्त मा-व्यक्ति / अनलाइन समर्थन प्रदान गर्दछ. तिनीहरूले कलेज देखि आफ्नो स्नातक र आफ्नो कलेज आवेदन प्रक्रिया सुरु देखि कम आय विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान.
यो विभिन्न राज्य अमेरिका मा शरणार्थी र आप्रवासी लागि छात्रवृत्ति एक सूची छ.
बढ्दो छात्रवृत्ति कोष आप्रवासी
अप गर्न को छात्रवृत्ति $7,000 कम आय आप्रवासी लागि. तपाईं उच्च विद्यालय देखि स्नातक वा कलेज र स्नातक कार्यक्रम मा भर्ना हुनुपर्छ. तपाईं बस्ने वा सैन फ्रांसिस्को खाडी क्षेत्र मा एक स्कूल उपस्थित हुनुपर्छ.
पहिलो-पुस्ता आप्रवासी विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति. तपाईं एक एशिया | हुनुपर्छ. नागरिक वा कानुनी निवासी क्यालिफोर्निया मा रहछन.
जेम्स एन्जेलो स्मारक सामाजिक न्याय छात्रवृत्ति
दक्षिणी मेन समुदाय कलेज धाउन एक2वर्ष छात्रवृत्ति. यो एक पोर्टल्याण्ड उच्च विद्यालय देखि स्नातक एक अफ्रिकी आप्रवासी गर्न सम्मानित छ.
ग्रैंड समुदाय फाउंडेशन
माथि को सूची 70 स्नातक विद्यार्थी लागि एक आवेदन छात्रवृत्ति. तपाईं केन्ट काउन्टी उच्च विद्यालयमा बस्न पर्छ. तपाईं पनि Allegan मा उच्च विद्यालय जाने सक्नुहुन्छ, बैरी, Ionia, ओटावा, Montcalm, मुस्केगन, वा Newaygo काउंटियहरुलाई.
इमेल: (शिक्षा कार्यक्रम अधिकृत रूथ बिशप) rbishop@grfoundation.org
प्रतिमान फाउंडेशन छात्रवृत्ति / DH Gustafson परिवार फाउंडेशन
पहिलो-पुस्ता अमेरिका वा आप्रवासी लागि छात्रवृत्ति. तपाईं एक इगान देखि स्नातक हुनुपर्छ, मिनेसोटा उच्च विद्यालय. तपाईंले यो छात्रवृत्ति लागि एक आवेदन लागू गर्न सक्नुहुन्छ र 100+ को इगान फाउंडेशन अन्य छात्रवृत्ति.
शरणार्थी र जागा काउन्टी को आप्रवासियों लागि उपलब्धि छात्रवृत्ति
पहिलो-पुस्ता एशिया | लागि छात्रवृत्ति. नागरिक, शरणार्थी, र आप्रवासी एक जागा काउन्टी उच्च विद्यालय देखि स्नातक. तपाईं लागू गर्न कानुनी कागजात आवश्यक छैन.
यो शरणार्थी जडान विद्यार्थी छात्रवृत्ति
महान् सिनसिनाटी त्रि-राज्य क्षेत्रमा जहाँ रहछन शरणार्थीका लागि छात्रवृत्ति. सबै शरणार्थी सार्वजनिक मा उच्च शिक्षा पछि लाग्दा, निजी, को एशिया | मा प्राविधिक कलेज वा विश्वविद्यालय. लागू गर्न सक्नुहुन्छ. कुनै उमेर प्रतिबन्ध हो.
को छात्रवृत्ति $500 पहिलो पुस्ता अमेरिकी युवा गर्न सम्मानित. तपाईं वित्तीय आवश्यकता प्रमाणित र एक धाउन योजना हुनुपर्छ7विश्वविद्यालय व्योमिङ को को सामुदायिक कलेजहरु.
SAT परीक्षण शुल्क र कलेज आवेदन शुल्क अधित्याग
शनि परीक्षण र कलेज आवेदन शुल्क अधित्याग
यो विद्यार्थी जसको परिवार एक कम आय लागि हो. एक अधित्याग तपाईं शुल्क तिर्नुपर्छ छैन भन्ने हो. तपाईं चार विद्यालयहरूको लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ. अधित्याग को एशिया | मा कम आय 11 औं र 12 औं ग्रेड विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध छन्. वा एशिया |. क्षेत्रहरूमा. एशिया |. को एशिया | बाहिर जीवित नागरिक. परीक्षण waived शुल्क छ गर्न सक्षम हुन सक्छ. तपाईं ग्रेड छन् भने तपाईं SAT विषय परीक्षण शुल्क अधित्याग लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ9मार्फत 12.
सिक्ने को विशिष्ट क्षेत्रहरु लागि छात्रवृत्ति
विरासत भाषा वक्ताहरु लागि अंग्रेजी (HLS) कार्यक्रम
एक 8 महिना कार्यक्रम व्यावसायिक-स्तरमा विकसित तपाईंको अंग्रेजी संचार सीप सुधार कि. एक पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रम गर्न स्वीकृत छन् जो मानिसहरूलाई प्रदान गरिनेछ. तपाईं आवश्यकता तपाईं प्रोग्राम संग गरेको हुँदा संघीय सरकार संग काम प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर.
यो Ariane डे Rothschild (adr) वृत्ति: सामाजिक उद्यमशीलता & क्रस-सांस्कृतिक नेटवर्क
उद्यमीहरू र सामाजिक नेताहरूले लागि दुई हप्ता संगति. तपाईं कहाँ भुक्तानी छैन काम मा एक संगति. सट्टा, तपाईं नयाँ कौशल सिक्न र तपाईंलाई मदत गर्न सक्छन् मान्छे भेट्न प्राप्त. तपाईं परिवर्तन र क्रस-सांस्कृतिक कुराकानीमा चासो हुनुपर्छ. यो यहूदी र मुसलमान समुदाय बीच कुराकानी छ भने यो भन्दा राम्रो छ.
संपर्क: http मा अनलाइन फारम://adrfellowship.org/contact/
क्याथोलिक राहत सेवा अन्तर्राष्ट्रिय विकास Fellows कार्यक्रम
अन्तर्राष्ट्रिय विकास मा एक क्यारियर मा काम गर्दै छन् जो मान्छे को लागि एक 12 महिना संगति कार्यक्रम. अन्तर्राष्ट्रिय विकास गर्न सान्दर्भिक एक क्षेत्रमा एक स्नातक डिग्री हुनुपर्छ. तपाईं पनि कम से कम खर्च हुनुपर्छ6एक विकास देशमा विदेशी महिना. तपाईं अंग्रेजी र दोस्रो भाषा पोख्त हुनुपर्छ.
मली Haley को फोटो सौजन्य, पोर्टल्याण्ड वयस्क शिक्षा कार्यक्रम.
विशिष्ट समूह र nationalities लागि छात्रवृत्ति
केही नींव, संगठन र व्यावसायिक संगतले केही ethnicities मानिसहरूलाई पुरस्कार छात्रवृत्ति पैसा बचत.
एशियाली, दक्षिण पूर्वी एशियाली र प्रशान्त आइल्यान्डर
एशियाली र प्रशान्त आइल्यान्डर अमेरिकी छात्रवृत्ति कोष
संग बलियो वित्तीय आवश्यकता विद्यार्थीहरूको मा एक ध्यान संग एशियाली र / वा प्रशान्त द्वीपहरु लागि छात्रवृत्ति र / वा जो विशिष्ट विश्वविद्यालय उपस्थित छन् कलेज जान आफ्नो परिवारको पहिलो हो (सूची लागि वेबसाइट हेर्न).
संपर्क: आउटरीच र समुदाय सम्बन्ध outreach@apiasf.org मा
एशियाई र प्यासिफिक आइल्यान्डर मा सक्रियता व्यक्त गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति (एपीआई). यो लेसबियन लागि पनि हो, समलिङ्गी, बिसेकषिल, transgender, र Queer (LGBTQ) अमेरिकामा एक स्कूलमा अध्ययन समुदाय.
पुनर्जनन केन्द्र छात्रवृत्ति
उत्प्रेरणा स्नातक र स्नातकोत्तर विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति. तपाईं विज्ञान अध्ययन मा planing हुनुपर्छ, दक्षिण एशियाली सम्पदा चिकित्सा वा जीव विद्यार्थीहरू.
अरब सम्पदा विद्यार्थीहरूलाई एक प्रतिस्पर्धी आधारमा सम्मानित छात्रवृत्ति. तपाईं एक समुदाय कलेज गर्न लागू मा planing हुनुपर्छ, चार वर्ष कलेज, र स्नातक स्कूल. स्कूल न्यूयोर्क हुनुपर्छ, नयाँ जर्सी, वा कनेक्टिकट.
को एशिया | मा अध्ययन धेरै छात्रवृत्ति अरब अमेरिकी लागि उपलब्ध वा अरब वंश को व्यक्तिहरूलाई. कृपया छात्रवृत्ति पूर्ण सूची लागि वेबसाइट भ्रमण.
ज्याक जी. Shaheen मास संचार छात्रवृत्ति
अरब वंश को विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति. तपाईं एक जुनियर हुनुपर्छ, मिडिया वा पत्रकारिता को क्षेत्र मा वरिष्ठ वा उपस्थित स्नातक स्कूल. तपाईं पनि पत्रकारितामा majoring गर्न सकिन्छ, रेडियो, टेलिभिजन र / वा फिलिम. तपाईं एक जुनियर वा वरिष्ठ रूपमा एक स्नातक कार्यक्रम हुनुपर्छ. तपाईं पनि एक स्नातक कार्यक्रममा हुन सक्छ.
अरब अमेरिकी व्यवसायी को नेटवर्क
उत्कृष्ट ग्रेड र सक्रियता र आफ्नो समुदाय संलग्न छन् जो अरब-अमेरिकी लागि छात्रवृत्ति.
संपर्क: http मा अनलाइन फारम://www.naaponline.org/about-naap/contact/
ईन्जिनियर र आर्किटेक्ट्स को अरब अमेरिकी संघ (हे) – राजधानी क्षेत्र
पूर्ण समय स्नातक वा स्नातकोत्तर विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति. तपाईं ईन्जिनियरिङ् अध्ययन हुनुपर्छ, वास्तुकला, कम्प्युटर विज्ञान, आईटी वा. तपाईं AAAEA को हालको विद्यार्थी सदस्य हुनुपर्छ – राजधानी क्षेत्र वा वर्तमान सदस्य को एक बच्चा.
मा मिशिगन विद्यालय उपस्थित अरब अमेरिकी महिलाहरु को लागि छात्रवृत्ति.
संपर्क: Yvonne अब्राहाम
पहिलो-पुस्ता आप्रवासी विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति. एक एशिया | हुनुपर्छ. नागरिक वा कानुनी निवासी क्यालिफोर्निया मा रहछन.
यो इरानी छात्रवृत्ति फाउंडेशन
वित्तीय आवश्यकता आधारित इरानी वंश को विद्यार्थीहरूको लागि धेरै छात्रवृत्ति, सामुदायिक संलग्नता, वा शैक्षिक उपलब्धि.
उच्च विद्यालय विद्यार्थी र इरानी वंश को पूर्ण समय कलेज विद्यार्थीहरू स्नातक उपलब्ध धेरै छात्रवृत्ति.
ल्याटिनो / हिस्पानिक
हिस्पानिक छात्रवृत्ति कोष
4 वर्ष वा उन्नत डिग्री खोजिरहेका हिस्पानिक विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति. बाट दायरामा छात्रवृत्ति $500 गर्न $5,000 सापेक्ष आवश्यकता आधारित.
संपर्क: https मा अनलाइन फारम://www.hsf.net/en_US/contact-us
यो MALDEF छात्रवृत्ति स्रोत गाइड
छात्रवृत्ति एक सूची, को MALDEF कानुन विद्यालय छात्रवृत्ति कार्यक्रम सहित. यो व्यवस्था विद्यार्थीहरूले ल्याटिनो समुदायको नागरिक अधिकार बढाउन चाहने लागि हो.
संपर्क: http मा अनलाइन फारम://www.maldef.org/contact/index.html
Salvadorian अमेरिकी नेतृत्व र शैक्षिक कोष गरेको (SALEF) हाम्रो सपनाहरु छात्रवृत्ति कोष पूरा
कलेज भर्ना गर्न चाहने मध्य अमेरिकी र ल्याटिनो विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति. तपाईं लस एन्जलस क्षेत्रमा बाँच्न पर्छ. छात्रवृत्ति बिना अध्यागमन स्थिति सबै विद्यार्थी खुला छन्.
विश्वविद्यालय म्यानमार फंड को मान्छे को
म्यानमार नयाँ विद्यार्थी विश्वविद्यालय मान्छे को एक एसोसिएट गरेको डिग्री खोजिरहेका लागि छात्रवृत्ति.
Ramallah प्यालेस्टाइनको अमेरिकी संघ
कम आय घरमा देखि प्यालेस्टाइन र प्यालेस्टाइन अमेरिकी विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति.
आपतकालीन शरणार्थी सहायता छात्रवृत्ति कोष
शरणार्थी वा आश्रय खोज्नेहरूको छन् संसारभरिका विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति.
सङ्कट मा उच्च शिक्षाका लागि IIE सिरिया कंसोर्टियम
एक सिरिया कंसोर्टियम सदस्य विश्वविद्यालय धाउन योजना सिरियाली विद्यार्थीहरूको लागि पूर्ण र आंशिक छात्रवृत्ति. तपाईं वेबसाइटमा विश्वविद्यालयहरु सूची हेर्न सक्नुहुन्छ.
आप्रवासी र प्रवासी श्रमिकहरुलाई लागि छात्रवृत्ति
Gloria Mattera राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति कोष
छात्रवृत्ति लायक $500 विद्यार्थी प्रवेश वा कलेज वा अन्य शिक्षा कार्यक्रम मा भर्ना लागि. यो उच्च विद्यालय छैन पूरा तर शिक्षा जारी क्षमता को प्रतिज्ञा देखाए गर्ने व्यक्तिहरूलाई लागि पनि हो.
संपर्क: क्रिस नर्टन, निर्देशक
पश्चिमी संघ फाउंडेशन परिवार छात्रवृत्ति कार्यक्रम
को छात्रवृत्ति $2,500 कलेज जान चाहने मा संसारभरि जवानहरूले समर्थन गर्न डिजाइन. तपाईं को उमेर बीच हुनुपर्छ 18-26. तपाईं एक स्टेम क्षेत्र वा व्यवसाय मा एक स्नातक डिग्री रोज्नुपर्छ.
टेलिफोन: (202) 686-8652
नयाँ अमेरिकी वा प्रथम पुस्ता नागरिक लागि छात्रवृत्ति
यो पावलले & डेजी Soros नयाँ अमेरिकी लागि फेलोशिप
एक $90,000 छात्रवृत्ति भन्दा सम्मानित2आप्रवासी लागि वर्ष, शरणार्थी, र पहिलो पुस्ता अमेरिका. तपाईं एक स्नातक डिग्री कार्यक्रममा पूर्ण समय भर्ना योजना हुनुपर्छ. तपाईं पनि उमेर हुनुपर्दछ 31.
पहिलो-पुस्ता नागरिक लागि छात्रवृत्ति, शरणार्थी, वा जागा काउन्टी स्कूल उपस्थित जो आप्रवासी, उत्तर कैरोलिना. त्यहाँ आवश्यक कुनै दस्तावेज हो.
संपर्क: जूलिया सिल्वा
Douvas मेमोरियल छात्रवृत्ति: पहिलो उत्पादन अमेरिकी छात्रवृत्ति
पहिलो-पुस्ता अमेरिका व्योमिङ मा रहछन लागि छात्रवृत्ति. तपाईं राज्य गरेको एक धाउन योजना हुनुपर्छ7सामुदायिक कलेजहरु वा विश्वविद्यालय व्योमिङ को.
पहिलो-पुस्ता अमेरिका वा आप्रवासी एक इगान देखि स्नातक लागि छात्रवृत्ति, मिनेसोटा उच्च विद्यालय. यो छात्रवृत्ति लागि एक आवेदन लागू र 100+ को इगान फाउंडेशन भित्र अन्य छात्रवृत्ति.
कुनै दस्तावेज संग छात्रवृत्ति आवश्यक
आप्रवासी लागि छात्रवृत्ति, पहिलो-पुस्ता नागरिक, वा शरणार्थी (कुनै दस्तावेज आवश्यक) जो जागा काउन्टी स्कूल, उत्तर कैरोलिना.
सीपीएस सपना कोष छात्रवृत्ति
एक शिकागो सार्वजनिक विद्यालय उपस्थित DREAMers लागि प्रतिभा र आवश्यकता आधारित छात्रवृत्ति.
अप गर्न को छात्रवृत्ति $7,000 उच्च विद्यालय देखि स्नातक कम आय आप्रवासी लागि. तपाईं पनि / सैन फ्रांसिस्को खाडी क्षेत्र स्कूल उपस्थित बस्ने कलेज र स्नातक कार्यक्रम मा भर्ना गर्न सकिन्छ.
सुनको ढोका विद्वान
संग विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति ठूलो-graded. तपाईं4वर्ष कलेज मा एक स्नातक डिग्री पछि लाग्न योजना हुनुपर्छ. आवेदकहरुलाई DACA वा टीपीएस लागि स्वीकृत हुनुपर्छ. तपाईंले भुक्तानी इन्टर्नशिप भाग लिन योग्य हुनुपर्छ.
शरणार्थी वा आश्रय खोज्नेहरूको लागि छात्रवृत्ति
Champlain कलेज नयाँ अमेरिकी विद्यार्थी छात्रवृत्ति
आवश्यक आधारित छात्रवृत्ति वरमोंट गरेको शरणार्थी र शरण-खोज्दै विद्यार्थीहरूको लागि. यो केवल Champlain कलेज धाउन योजना विद्यार्थीहरूको लागि छ.
शरणार्थी वा आश्रय खोज्नेहरूको छन् संसारभरिका विद्यार्थीहरूको उपलब्ध.
शरणार्थी लागि सानो दिग्गज छात्रवृत्ति कोष
शरणार्थी वा आश्रय खोज्नेहरूको विश्वविद्यालय मान्छे को धाउन योजना लागि छात्रवृत्ति.
यो IIE विद्वान उद्धार कोष
यो एक वर्ष लामो संगति छ. एक संगति जहाँ तपाईं नयाँ कौशल सिक्न प्राप्त एक बेतलबी काम छ. यो प्राध्यापकहरू लागि हो, अनुसन्धानकर्ताहरूले, र जो आफ्नो घर देशहरूमा आफ्नो जीवनलाई धम्की र करियर सामना सार्वजनिक बुद्धिजीवियों.
यो Hegg अदालत कोष
आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्र पुन: प्रवेश गर्न चाहने महिलाका लागि व्यावसायिक पाठ्यक्रम. आवश्यक राष्ट्रिय परीक्षा पास गर्न आफ्नो नयाँ देश मा समायोजनका लागि भाषा पाठ्यक्रम वा पाठ्यक्रम पनि छन्.
त्यहाँ आप्रवासी र शरणार्थीका लागि धेरै छात्रवृत्ति छन्. तपाईं अरूको थाहा छ भने थप गर्न, कृपया इमेल: info@therefugeecenter.org. हामी सूचीमा तिनीहरूलाई थप्नेछ.
तपाईं पनि अनुदान लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ, जो आर्थिक सहयोग को अर्को प्रकारको हो. संघीय विद्यार्थी सहायता को कार्यालय अनुदान प्रदान, ऋण, कलेज वा क्यारियर स्कूल र काम-अध्ययन धन. तपाईं को लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ फ्री छात्र सहायता संघीय आवेदन (FAFSA).
कलेज लागि लागू गर्न कसरी सिक्न
कलेज गर्न लागू जानकारी